Etu ị ga - esi gbalite ngwa ngwa gị ma gbue ibu ibu | Nutri Nri
Michael Serrano | | Atụmatụ ifelata, Nkwere maka enyemaka
Mara otu esi agbalite ngwa ngwa metabolism gị nwere ike inye aka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere nwayọ metabolism. Mgbe obughi oke oso metabolism nwere ike ịghọ ihe mgbochi na-egbochi gị ịkwụsị ibu dị gị mkpa n'agbanyeghị mbọ gị.
Metabolism bụ ụzọ na ogo ahụ gị na-eji iji gbanwee nri n'ime ike ma gbaa ya ọkụ. Ya mere, ọ bụ ihe na-achọpụta ihe maka ibu na abụba ahụ. Na mgbakwunye, ọ na - egosi ọsọ ọ bụla ị ga - enwe abụba ma ọ bụ buru ibu. Chọpụta ihe ndị kasị dị irè na-enye gị metabolism a agbam ume ma si otú a malite ịmalite calorie ndị ọzọ ugbu a.
1 Kedu ihe na-akpata nwayọọ nwayọọ metabolism?
2 Ihe ndị na-enyere aka ime ka ọ dịkwuo ngwa ngwa
2.1 Mụọ mmega ahụ
2.2 Ụọ mmiri zuru ezu
2.3 Jiri nnu nwere nnu
2.4 Na-a coffeeụ kọfị
2.5 Rie nụkwuo eriri
2.6 Na-a vitaminsụ vitamin B, iron na calcium
2.7 Zere nri ndị ị na-anaghị anabata ha
Kedu ihe na-akpata nwayọọ nwayọọ metabolism?
Dị ka ị marala, enwere ngwa ngwa metabolisms na nwayọ metabolism. Ọ bụ ya mere ụfọdụ mmadụ ji eri ihe niile n’ebughị ibu, ebe ndị ọzọ na-achọpụta ngwa ngwa n’úkwù ha. Ma ọ bụ na ngwa ngwa nke metabolism, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke calorie ndị a pụrụ iwesa n'amaghị ama na ọnụ ọgụgụ.
Gender, afọ, na akwara muscle bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-emetụta metabolic ọnụego. Ma ọrụ kachasị mkpa na ọnụego nke ahụ gị na-ere calorie ga-arụ site na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Ndị nwere nwayọ metabolism na-eketa ya n'aka ndị mụrụ ha site na mkpụrụ ndụ ihe nketa ha. Nmeghari metabolism nwere ike ibute nsogbu dika ibu ibu na ibu. Ebe ọ bụ na ha na-emetụta ụzọ ahụ si eji ike, Ndị na-esonụ bụ ihe ndị ọzọ na-ebutekarị ngwa ngwa metabolism:
Nri ndị dị oke oke, nke nwere abụba, ma ọ bụ obere carbohydrates
Ighafere nri ma obu oge nri na agbanwe
Ihe ndị na-enyere aka ime ka ọ dịkwuo ngwa ngwa
Ka o sina dị, enwere ọtụtụ agwa dị mma nke nwere ike inyere gị aka mee ka ngwa ngwa metabolism gị ngwa ngwa. Yabụ ọ bụrụ na ahụ gị adịghị ngwa ịmị calorie ị na-eri, nwalee ndụmọdụ ndị a dị mfe.
Mụọ mmega ahụ
A na-ewere mmega ahụ dị ka otu n'ime usoro kachasị mma iji mee ka metabolism gị dị ngwa. Inwe mmeghari na enyere gi aka igba mmanu oku, nchikota ha na eme ka ike ghari ikwusi. Ọ na - ewulitekwa akwara, nke dị mkpa maka metabolism, ka ị na - enwekwu ahụ ike, ọ na - arụ ọrụ ọsịsọ.
Ya mere gbaa egwuregwu ma ọ bụrụ na ịnweghị, na-ejide n'aka jikọta mmega ahụ nke ikuku na ọzụzụ ike. Ọ bụrụ na ị na-emega ahụ, chọta ụzọ iji webata mmega ahụ kwa ụbọchị. Getpụ n'oche gị kwa awa abụọ iji gbatịa ntakịrị ma mee plank ma ọ bụ ụfọdụ squats bụ ezigbo echiche.
Etu ị ga-esi nweta ike ọzụzụ gị
Ụọ mmiri zuru ezu
Mgbanwe gị nwere ike ịkwụsịlata ma ọ bụrụ na ị naghị a drinkụ mmiri zuru oke. Ihe kpatara ya bụ na H2O ga-emetụta ike iji, na-akwalite ọnwụ. Ya mere echefula ịkwado ahụ gị mmiri ọ chọrọ kwa ụbọchị. Chetakwa na ị nwekwara ike inye mmiri ahụ n’ahụ site na ọtụtụ nri dị mma. Nnukwu ihe atụ bụ anyụ.
Jiri nnu nwere nnu
Thyroid chọrọ ayodiin iji jikwaa metabolism. Zụrụ nnu iodized karịa nnu mgbe niile. Ọzọkwa, ọ dị mma ijide n'aka na nri gị gụnyere nri ndị jupụtara na ayodiin, dị ka ọ dị n’ihe banyere prawn.
Na-a coffeeụ kọfị
Caffeine bụ otu n'ime ihe ndị kachasị dị irè mgbe ọ na-amalite ịmalite metabolic engine.. Tii ga-emekwa otu ihe ahụ. N'aka nke ọzọ, caffeine adịghị mma maka ndị na-arịa ọrịa ụfọdụ. Ya mere, buru ụzọ jụọ dọkịta gị ka ị hụ ma ị drinkingụọ kọfị dị mma maka gị.
Rie nụkwuo eriri
Enwere ọtụtụ ọrụ na-egosi na imirikiti mmadụ na-eri nri dị ala. Otu n'ime ọtụtụ uru nke ihe a (nke ị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ nri) ga-abụ inye aka debe metabolism gị na-arụ ọrụ zuru oke.
Na-a vitaminsụ vitamin B, iron na calcium
Vitamin B, iron na calcium so na ha nri ndị ejikọtara na ngwangwa metabolism. Dum grains bụ isi mmalite nke B vitamin, mgbe ọ na-abịa iron, tụlee inine na mkpo dị ka agwa ma ọ bụ chickpeas. A na-ahụ Calcium na ngwaahịa mmiri ara ehi na akwụkwọ nri dị ka broccoli ma ọ bụ fig.
Zere nri ndị ị na-anaghị anabata ha
Enwere ọtụtụ ndị na-adịghị anabata lactose ma ọ bụ gluten. Mbufụt nke nwere ike ime na eriri afọ n'ọnọdụ ndị a, ọ ga-emetụta akụkụ dị iche iche nke ahụike n'ụzọ na-adịghị mma, gụnyere ọsọ nke metabolism. Mgbe ị jụrụ ndị ọkachamara maka otu esi eme ka nri gị dị ngwa site na nri, ha na-adụkarị ọdụ na ịmachi sodium na nchekwa, nke na-ejupụta n'ụdị nri niile echekwara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Otu esi eme ka metabolism